Samsung dia manolotra ny Galaxy Tab S5e, ny takelaka faran'izay mahay sy kanto indrindra amin'ny tsena Android | Vaovao momba ny gadget
Samsung dia manolotra ny Galaxy Tab S5e, ny takelaka faran'izay mahomby sy kanto indrindra eo amin'ny tsena Android
Ignacio Sala | | takela-bato
Ny tsenan'ny takelaka Android dia voafetra amin'ny vokatra avoakan'ny orinasa koreana eny an-tsena, satria ny mpamokatra sisa dia tsy manome modely ho antsika sy ireo manolotra, tena mahasoa tokoa izy ireo mametra ny fampiasana azontsika omena hijerena pejy web, hamaky paositra ary zavatra hafa kely.
Raha te handany atiny multimedia sy hilalao lalao matanjaka hafa izahay, ny hany safidy kalitao eny an-tsena dia atolotry Samsung. Samsung dia nanolotra takelaka vaovao, ny Galaxy Tab S5e, takelaka iray natao hanolorana ny fialamboly sy ny fifandraisana tsara indrindra. Atorinay anao ny pitsopitsony rehetra.
1 Volavola an'ny Galaxy Tab S5e
2 Fampahalalana an-tsaina namboarina tamin'i Bixby
3 Fampisehoana sinema
4 Famaritana ny Galaxy Tab S5e
5 Ny vidiny sy ny fisian'ny Galaxy Tab S5e
Volavola an'ny Galaxy Tab S5e
Ny Galaxy Tab S5e vaovao dia tsy miavaka amin'ny zava-bitany fotsiny, fa tsy mandà ny famolavolana amin'ny fotoana rehetra. Manolotra antsika ny Tab S5e a Vatan'ny vy matevina 5,5 mm ary lanja 400 grama fotsiny, izay mahatonga azy io ho iray amin'ireo be mpampiasa sy be mpampiasa indrindra eny an-tsena. Ankoatr'izay dia misy amin'ny volafotsy, mainty sy volamena, mba hahafahan'ny mpampiasa misafidy ny maodely mifanaraka amin'ny tsirony.
Ny fizakantena dia iray amin'ireo lafiny lehibe indrindra amin'ny takelaka iray, ary ny Tab S5e dia tsy mandiso fanantenana antsika amin'izany, satria tonga fahaleovan-tena 14,5 ora, noho ny fanatsarana ny zava-bitany na amin'ny fizahana, lalao, fihinanana atiny ...
Fampahalalana an-tsaina namboarina tamin'i Bixby
Mpanampy virtoaly dia lasa iray amin'ny fianakaviana maro amin'ny iray amin'ny fianakaviana. Ity takelaka vaovao ity dia mampiditra ny Bixby 2.0, ilay mpanampy an'ny Samsung izay ahafahantsika mifanerasera tsy hoe hametraka fotsiny ireo fanontaniana mahazatra momba ny toetrandro na ny fahasarotan'ny fandaharam-potoananay, fa koa lasa ivon'ny hetsika hifehezana ireo fitaovana mifandray rehetra.
Misaotra an'i Bixby, afaka miara-manatanteraka asa isika, toa ny velomy ny fahitalavitra ary asaivo manadio ny heriny ny jiro ary miova ho loko mafana kokoa. Saingy mba hahazoana tombony betsaka amin'izany, miankina amin'ny fampiasana tiantsika hatao, noho ny kitendry (izay amidy tsy miankina) dia afaka mamadika ny Tab S5e ho solosaina noho ny Samsung DeX.
Samsung DeX no sehatra finday / birao apetrak'i Samsung eo am-pelatanantsika, manome antsika fahafaha-manonofinofisin'ny maro amintsika taloha sy izany koa Izy io koa dia misy ao amin'ny terminal farany avo lenta an'ny orinasa toa ny Galaxy S9 sy ny Galaxy Note 9.
Raha ny iray amin'ireo fampiasana izay homenay ny takelaka dia ny mandany horonantsary amin'ny streaming, na alaina mivantana amin'ny fitaovana, misaotra ny Fampisehoana Super AMOLED, ho vitantsika ny hanao azy amin'ny fomba. Manolotra antsika ny efijery a tahan'ny 16:10 sy 10,5 santimetatra miaraka amin'ny frame mihena izay manome antsika fahatsapana lalina izay tsy dia ho hitantsika amin'ny takelaka hafa eny an-tsena.
Raha tsy manana serivisy horonantsary mivantana izahay, rehefa mividy ny Tab S5e dia ho afaka mankafy ny YouTube Premium maimaim-poana sy mandritra ny 4 volana, serivisy fitaterana mozika sy horonan-tsarimihetsika goavambe fikarohana.
Ny feo dia ampahany manan-danja hafa izay tsy maintsy raisintsika rehefa mividy fitaovana amin'ity karazana ity ary ny Galaxy Tab S5e dia tsy latsaka noho izany. Ity maodely ity dia manome antsika kalitao avo lenta noho ny Mpandahateny 4 mampiseho ny haitao stereo mihodina Manolotra raki-peo mahery vaika izy ireo izay mifanaraka amin'ny fomba itahirizanao ilay takelaka.
Ho fanampin'izay, manolotra antsika izy io fampidirana amina teknolojia Dolby Atmos sy feo sonia AKG izay manome antsika feo manodidina an'i 3D. Mba hankafizana ny kalitaon'ny feo natolotry ny Tab S5e, Samsung dia manome antsika famandrihana premium maimaim-poana amin'ny Spotify mandritra ny 3 volana, fampiroboroboana iray izay ampidirina amin'ny YouTube miaraka amin'ny sehatra video streaming
Famaritana ny Galaxy Tab S5e
efijery 10.5 "WQXGA Super AMOLED izay ahafahantsika mamoaka horonantsary UHD 4K amin'ny 60 fps.
processeur Octa-core 64-processeur kely (2 × 2.0 GHz & 6 × 1.7 GHz)
Fahatsiarovana sy fitahirizana 4GB + 64GB na 6GB + 128GB - microSD hatramin'ny 512GB
Audio Mpandahateny AKG 4 miaraka amin'ny teknolojia Dolby Atmos
Efitra lehibe Resolution 13 mpx izay ahafahantsika mirakitra horonantsary ao amin'ny UHD 4K (3840 × 2160) @ 30fps
Fakan-tsary Rear Vahaolana 8 mpx
Sela Mpandray Hafanana Accelerometer - Sensor de fingerprint - Gyroscope - Geomagnetic Sensor - Hall Sensor - RGB Light Sensor
lafiny 245.0 X 160.0 X 5.5mm
lanja Gramin'ny 400
bateria 7.040 mAh miaraka amina tohana haingana
Rafitra fandidiana Android Pie 9.0
Accessories Fonony boky fitehirizam-boky - Fototra famenoana POGO - fonony maivana
Ny vidiny sy ny fisian'ny Galaxy Tab S5e
vaovao Samsung Galaxy Tab S5e dia hamely ny tsena amin'ny volana aprily, fa amin'izao fotoana izao, ny vidin'ny maodely fototra misy RAM 4 GB sy fitehirizana 64 GB dia mbola tsy nambara. Raha vantany vao ambara izy ireo dia hampahafantarinay anao haingana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » telephony » takela-bato » Samsung dia manolotra ny Galaxy Tab S5e, ny takelaka faran'izay mahomby sy kanto indrindra eo amin'ny tsena Android
Logitech K600, mamakafaka ny fitendry multipurpose tsara indrindra ho an'ny Smart TV izahay
Inona no hatao raha angalarina ny findaiko